Ukuphupha ngomendo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iintlobo ngeentlobo zeesimboli ziyavela emaphupheni ethu, anokuba neenkcazo ezahlukileyo. Nangona kunjalo, amaphupha esihamba kuwo imigama okanye sifuna indlela ahlala ebaluleke ngokukodwa. Kubalulekile ukuba ingathatheli ingqalelo kuphela indlela esihamba ngayo, kodwa nendlela eyakhiwe ngayo imeko-bume ingakumbi umhlaba ongaphantsi.
Kwiimeko ezininzi umntu usendleleni eyaziwayo ephupheni. Oku kunokuba mpuluswa okanye kunamatye njengendawo yokuhamba ngamatye okanye indlela elula yegrabile okanye inqanaba elihle lendlela okanye indlela yokuqhuba, ukuqhuba ukwehla okanye ukunyuka, ukwahlula, okanye okunxulunyaniswa neengozi ezinjengamasela asendleleni.
Indlela inokuthe tye, idiagonal, okanye kwigophe elikhulu. Kukho indledlana esixekweni esixekweni, indlela evulekileyo yamahlathi, indledlana yeenyawo, nendlela ehamba kakuhle - zonke ezi ziindlela. Kwakhona, kukho iindlela ezihlala zihamba ngqo kwaye zingaze zifune ukuphela, kwaye ezo zikhokelela esiphelweni. Yonke le miba kufuneka ithathelwe ingqalelo xa kutolikwa uphawu lwendlela "yendlela."
Ukuba uhlangabezana nomqobo kwindlela yamaphupha akho, kusenokufuneka ujongane nemeko efanayo kwi el mundo yomlindo; uyazi ngokuqinisekileyo eli lizwi "Beka imiqobo endleleni yomntu". Kunokubakho umntu ofuna ukonzakalisa umphuphi ... ungafumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kwisicatshulwa esingezantsi!
Oku kulandelayo malunga nokutolikwa komqondiso wephupha 'umendo'. Kodwa ukuba ujonga amagama amancinci "uhambile", oko kukuthi, ukuba kukho into elahlekileyo okanye ihambileyo, uyakuyifumana kunye nesimboli yamaphupha "lahleka"! «
Ukuze utolike iphupha lakho lendlela ngendlela eyonelisayo, siqokelele apha amaphupha aqhelekileyo malunga neesimboli. Apha ngezantsi, uyakufumana ukutolikwa kwamaphupha ngokubanzi, ezengqondo kunye nokomoya kwendlela:
1 Uphawu lwephupha «indlela» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Ukujonga indlela yephupha: iphi?
1.2 Iphupha lendlela evaliweyo
2 Uphawu lwephupha «indlela» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «indlela» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «indlela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «indlela» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Ukujonga indlela yephupha: iphi?
Ukuba umntu ophuphayo ufuna indlela ngelixa elele, oku kungabonisa iimfuno ezifihliweyo kunye nezinto azifunayo kwilizwe lokwenyani. Ukuba indlela yafunyanwa ephupheni, kunokwenzeka ukuba umntu ophuphayo angayifeza iminqweno yakhe. Kodwa ukuba awuyifumani indlela yakho, oku kungabonisa ingxaki ekufezekiseni iinjongo zakho.
Iphupha lendlela evaliweyo
Ngaba indlela yayivalwe ephupheni lakho, umzekelo ngumqobo, ucingo, okanye isilwanyana esikhulu? Emva kwale meko yokuphupha kunokwenzeka ubunzima obunokuboyisa kwiimeko ezifanelekileyo. Kungekudala unokuvavanywa ebomini bakho, okunokuthatha amandla amaninzi. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba uya kuphuma kweli nqanaba lobomi njengobuntu obuqinisiweyo.
Uphawu lwephupha «indlela» - ukutolikwa ngokubanzi
Indlela ihlala imele uphawu lwayo ephupheni. Indlela yobomi Ukuba yindlela ethe tye kwaye ethe tyaba umntu aphupha ngokuhamba, enye iqhubela phambili ebomini, umntu ukhula ngakumbi. Ngokwenza njalo, umntu ochaphazelekayo akazukuyoyisa nayiphi na imiqobo okanye izithintelo ekulula ukuyoyisa. Uyakwazi ukujongana nezona ngxaki zinzima zobomi bemihla ngemihla ngesakhono.
Ukuba indlela yamaphupha ikwakhokelela ekukhuphukeni, umntu ochaphazelekayo kungekudala uza kuba Ukusebenza okuphezulu kwaye unomvuzo ofanelekileyo. Nangona kunjalo, ukuba uyehla ukwehla, kuya kufuneka uzibuze ukuba zeziphi iziganeko ezimbi ezigrogrisayo ngoku kwaye ungaziyeka njani. Indlela eqhubela phambili ngalo mzuzu uleleyo, ayinakuqhubeka.
Indlela ejikelezayo nejikajikayo inokuthetha into efanayo. Umntu ekuthethwa ngaye akanakho ukufikelela kwiinjongo zakhe kwaye kufuneka amkele iindlela eziphambukileyo. Kusenokufuneka ulalanise.
Ukuba iphupha limalunga nendlela enamatye kakhulu, inokuba kakhulu ingxaki yiza. Ngokoluvo ngokubanzi, umntu ochaphazelekayo uya kuvavanywa ngexesha apho kufuneka angalahli ithemba.
Amasela ahlala ecaleni kwendlela ephupheni kwaye aceba ukuhlasela iphupha elo Shoot. Unokuba neendlela zokuziphatha ngokwesondo ozama ukuzicinezela kubomi bokwenyani. Oku kuyasebenza ukuba izilwanyana zasendle zibonwa ecaleni kwendlela.
Uphawu lwephupha «indlela» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinguqulelo yengqondo yamaphupha, umendo ukwangumqondiso wobomi baloo mntu kuthethwa ngaye. Ngokwendlela yokutolika, indlela ikwabhekisa kubudlelwane ne ngokufanayo.
Kuxhomekeke kwiimvakalelo ezinxulumene nokuhamba kwindlela yamaphupha, kunye nohlobo lwendlela, ibonisa indlela lo mntu kuthethwa ngaye enxibelelana nabanye abantu. Ukuba uwedwa ephupheni, umzekelo, kwindlela yodwa yomhlaba, unganqwenela ixesha elingakumbi Ukuba usendleleni eya kubona umhlobo, bonisa indlela obaluleke ngayo kuye. Umntu othile unempembelelo enkulu kulo lonke uphuhliso lomntu ephupheni.
Ukusuka kwimbono yengqondo, amaphupha apho indlela yahlulwe khona nawo abaluleke kakhulu. Isimboli ke ibonisa uphawu olubalulekileyo isigqibophambi kwalo mntu kuthethwa ngaye kubomi bokwenyani. Akufuneki ndiyiphephe kwakhona, kodwa ndijongane nayo.
Uphawu lwephupha «indlela» - ukutolika kokomoya
Uphawu "lwendlela" yephupha yalatha kwi ukugxila ngokomoya ujonge kweliphi icala lo mntu kuthethwa ngaye.